Ahoana ny fomba hisorohana ny tebiteby ao amin'ny alika | Tontolo alika
Ahoana ny fomba hisorohana ny fanahiana amin'ny alika dia famerenana toe-javatra maromaro atrehin'ny alika maro isan'andro, ary andraikitsika tanteraka izany, amin'ny maha-zanak'olon-droa ny mpivady, ary matetika tsy dia jerentsika loatra, satria noraisintsika ho azy ny fanontaniana sasantsasany momba ny lafiny sasany amin'ny fifandraisantsika amin'izy ireo, ny fanaovanay azy ireo amin'ny fomba izay tena manimba azy ireo.
Ao amin'ny lahatsoratra anio, Hiatrika anao amin'ny toe-javatra hahafantaranao tsara ny tenanao ianao ary antenaiko fa manampy anao hanova fihetsika vitsivitsy izany, izay hiafara amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny bibyo. Avelako eo am-baravarana ianao; Ahoana ny fomba hisorohana ny fanahiana amin'ny alika. Manantena aho fa tianao izany ary hitanao fa mahasoa.
2 Fanampiana ny biby
2.1 Zavatra mihoatra ny fitsaboana azy ireo toy ny olombelona
2.2 Paradigma napetraka
2.2.1 Andraikitra lehibe
3 Ilaina sy antony manosika
3.1 Afa-po izay ilaina
3.2 Antony fanentanana
3.3 Adin-tsaina sy sakafo
3.4 Tsy miraharaha izay ilainao
3.5 Ny farany ambany
3.6 Ilaina ny sakafo
4.1 Misoroka ny fanahiana ao amin'ny alikako dia mora
4.2 Miarahaba sy manidy
Amin'ny andro andavan'andro ataon'ny olona iray izay miara-miasa amin'ny alika sy ny tompony toa ahy dia miatrika olana iray aho, ho ahy, no fototry ny olana maro izay misy fiatraikany amin'ny fifamatoranay amin'ireo alikantsika, ary izay ananantsika tsy misy hevitra na rehefa ananantsika izany dia diso tanteraka ...Ary matetika fa tsy mila sy indraindray tsy tiana, dia manao ny aintsika ho biby isika ka mampiditra azy ireo amin'ny fifanenjanana izay tsy nanomanana azy ireo, mamorona fizarana adin-tsaina izay matetika dia mivadika toe-javatra eo an-tampon'ny tsy fifehezana tanteraka sy tanteraka, izay mitarika antsika hisalasala mihitsy raha mahavita na manana alika isika.
Ary ara-dalàna izany fahatsapana izany. Tsy mora ny mahafantatra ny fomba hisorohana ny fanahiana amin'ny alika. Tamin'ny lahatsoratra teo aloha Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina ateraky ny olombelona ary ao Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina mahatonga ny olombelona II, Miresaka momba an'io lohahevitra io amin'ny halalinina bebe kokoa aho.
Fanampiana ny biby
Zavatra mihoatra ny fitsaboana azy ireo toy ny olombelona
Rehefa miresaka momba ny maha-olona aho dia tsy midika akory izany hoe mandray azy ireo ho toy ny olombelona fotsiny isika, fa imbetsaka, mamindra ny adin-tsaina sy ny olantsika isika, izay rahateo, olan'ny olona iray ary tsy takatry ny sain'izy ireo izany, ary imbetsaka tsy mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
Voalohany indrindra, tiako ny manasongadina fa ny alika dia manana filàna fototra toa antsika ihany, ary na dia eo aza ny zava-misy fa ho antsika dia mety tsy hitovy lanja amin'ny filantsika soatoavina ireo filàna ireo, na satria tena fototra izany na satria tsy hizara azy ireo isika, ho azy ireo no fototry ny fahasambarana mitovy, ary zavatra iray fantatro tsara: ny ankamaroan'ny olona manana alika dia maniry ny hahita azy sambatra.
Izany no antony tiako hampifantohana an'ity lahatsoratra ity, amin'ny fanandramana hanova kely ny paradigma napetrakay momba ny fifandraisana amin'ny alikanay, amin'ny fanoratana momba ny fisian'ny toe-javatra mahazatra amin'ny fiainana iombonantsika amin'ny biby fiompintsika. , ary na izany aza dia misy fiatraikany amintsika amin'ny fomba hafa mihitsy.
Heveriko fa hanaiky isika fa ny filan'ny alikantsika rehetra dia tsy maintsy arahinay amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa, ary izany no tiako holazaina fa raha mihinana ny alikay dia satria manome sakafo azy isika, raha misotro ny alikantsika dia satria manome isika zava-pisotro ho azy, raha milalao ny alikantsika dia noho isika milalao miaraka aminy na manome kilalao na mpiara-milalao aminy isika. Tokony ho fantatrao tsara izao: Ny zavatra rehetra ilainao sy ilainao dia avy aminay. Ary andraikitra lehibe izany, araka ny nolazain'i Peter Parker.
Ity andraikitra ity dia loharanom-pahasambarana ary loharanom-olana lehibe koa raha tsy haintsika ny miatrika azy amin'ny fomba marina sy lojika. Ny fomba ahazoako manatona azy dia ny fahalalana, izany Ny fanapaha-kevitra rehetra raisintsika momba ny fiainantsika na ny ain'ny alikanay dia misy fiantraikany amin'izany, indraindray dia lalina sy mahery tokoa, ka nanjary loharanom-pihenjanana tsy mety ritra sy maharitra mandrakizay raha tsy fantatsika izany, ary matetika isika dia tsy.
Manapa-kevitra maivana izahay, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny fiainan'ny bibinay, ary avy eo manontany tena izahay hoe inona no mety hitranga, inona no mety tsy nety, rehefa nametraka ilay olana ilay namantsika alika, ary avy eo niroso tamin'ny fametrahana ny andraikitra rehetra tao. ny alika mahantra, rehefa tsy fantatsika na tsy tiantsika ny mahita fa eo an-tanantsika ny vahaolana amin'ny olana satria ny vahaolana mahantra dia azon'ny biby omena raha isika no mandray ny fanapahan-kevitra rehetra ho azy, na na dia tsy azon'ny fahalalanao na ny fahaizanao misaina aza ny fandraisana azy ireo.
Noho io antony io dia misy toe-javatra ratsy amin'ny alika ary ataontsika isan'andro, ary izany dia mitarika loharanom-pahasahiranana ho azy. Ary homeko ohatra maromaro momba an'io ianao mba hahazoana antoka fa mazava aminao izany.
Ilaina sy antony manosika
Afa-po izay ilaina
Ny alika dia mila misotro isan'andro, mazava ho antsika izany. Ny alika dia mila manana rano velona misy tontolo andro. Nahita trano nisy alika aho, izay hita fa tsy ampy ny fitoeran-drano hitazomana rano ampy hofenoina alika iray andro.
Izany dia miteraka tsy fahatokisana amin'ny alika, satria lojika fa rehefa misotro azy izy dia ho lany, ary tsy hisy rano mandra-pamenoin'ny tompon'andraikitra azy io, izay amin'ity tompony ity, ny sakaizany. Rehefa miresaka an'ity lohahevitra ity amin'ny tompon'ilay biby aho dia saika hitako foana ny valiny mitovy: nofenoiko indraindray. Indraindray ... ilay andianteny mitovy dia manondro fa hisy fotoana tsy hisy ny fitoeran-javatra, ary inona no hataon'ny alika amin'izany fotoana izany raha mangetaheta izy? Raha lasa zatra izany toe-javatra izany, zavatra mahazatra loatra amin'ny fisotroana dia mety hanjary loharanom-pahasahiranana ho an'ilay biby mahantra.
Ohatra iray hafa izay tsy tiako ny mahita: mamoaka ny alika. Isan'andro aho dia miatrika fianakaviana izay manana fahazarana tsy manome lanja firy ny fitsangantsanganan'ny biby any ivelany. Fahita ihany koa ny mahita ireo izay mino fa satria manana tokana ivelany lehibe izy ireo, dia tsy mila mivoaka ivelany intsony ilay alika. Fahadisoana lehibe izany. Ary lesoka ny fandoavany lafo.
Ny alika tsy mivoaka, dia alika tsy mifandraika amin'ny tontolo iainany, izay tsy mifampiresaka amin'ny lafiny ifotony amin'ireo olona hafa karazana ao aminy, izay akaiky azy, dia hahatonga azy tsy afaka milalao alika hafa na tsy afaka manao ny iray amin'ireo hetsika miala sasatra indrindra ho an'ny alika, mandeha.
Omeko ohatra iray ianao izay azo antoka fa mahazatra anao; Reraka any an-trano isika ary tsy maintsy mamoaka ilay namantsika, izay efa niandry anay nandritra ny 5 ora ary te-hivoaka mba hiondrika, hikotrika, hilalao ary hiala sasatra kely ary te hipetraka na hatory hiala sasatra isika . Misy olona avy any am-piasana, mianatra na avy amin'ny fety, mametraka ny filan'ny alika ambanin'ny azy, ary mamoaka azy io mba hanamaivanana ny tenany ary avy eo mamerina azy io ao anatin'ny rindrin'ny trano efatra. Inona no vokatr'izany eo amin'ilay biby? Izy io dia mametra azy amin'ny fandanianao ny filanao sy ny zavatra ilainao, miteraka fihenjanana sy fiasan-doha amin'ny tsy fananana ny filàna fototra aminy toy ny fifandraisana, filalaovana, fandehanana, fofona, na fanalefahana ny fahalianany.
Ireo hetsika rehetra ireo dia manampy azy hitantana amin'ny fomba mahomby sy tsara ho azy, ny adin-tsaina ateraky ny fiainany eo amin'ny fiarahamonin'olombelona, ​​izay ilany mandany ora sy ora maro mihidy nefa tsy manao na inona na inona mifamatotra mba hahafahany mandeha. Ny fanaovana na inona na inona dia tsy misy fiantraikany ho antsika toa azy.
Ny alika mihidy tsy miasa andro tontolo, tsy misy karazana fanentanana, dia mialoha ny hamolavola karazana patolojia, na ara-tsaina na ara-batana, noho ny alika izay manana asa an-tsehatra na avo mandritra ny andro. Ny alika dia mila hetsika andavanandro izay manarona ny filalaovany sy ny filan'ny fanatanjahan-tena, ary koa ny fahalianana afaka mifanerasera amin'ny olona vaovao, na ny karazany na ny karazany hafa, na amin'ny tontolo vaovao, na hanadihady zavatra vaovao, sns.
Ity olana ity dia mety hanjary olana raha tsy voavaha tsara io satria io dia ho lasa antony manosika tsy maintsy rakotra mba hanomezana fahafaham-po azy. Ary hanome ohatra ohatra amin'ny sakafo aho.
Adin-tsaina sy sakafo
Ohatra iray mazava amin'ny maha-olombelona, ​​izay raha ny hevitro dia iray amin'ireo loharanom-pahasahiranana lehibe indrindra ho an'ny alika, dia ny sakafo omentsika azy, ary tsy te hanome izany ny ambin-tsakafo azontsika aho, izay azo ekena tokoa, Ny tiako lazaina dia ny sakafo mifototra amin'ny sakafo indostrialy. Ireo sakafom-bary ireo dia natao indrindra amin'ny voamadinika ary manome anjara biriky gliosida avo kokoa noho izay tokony hatao ho an'ny karnavora. Amin'ny maha karnavora azy, ny alika dia tsy mamokatra anzima amylase amin'ny rora mba hametahana tsara ny gliosida. Na izany aza, ny ankamaroantsika dia mihevitra fa ny famahanana ny mofon'alika, ny vary na ny serealy betsaka, ary koa isika izay omnivores dia mahasoa amin'ny fahasalamany. Ary tsy toy izany mihitsy. Ity ho ahy dia ohatra mazava iray amin'ny maha-olombelona izay mitranga amin'ny firaisana tsikombakomba amin'ny marika famahanana, satria ho azy ireo dia mora kokoa izy io ary miteraka tombony bebe kokoa, manana vokatra izay akora fototra dia voamadinika, mankany amin'ireo tsipika misy ny proteinina niavian'ny biby. Na izany aza, olana iray hafa io.
Tsy miraharaha izay ilainao
Raha hiverenana ny fanontaniana eo am-pelatanana, matetika, dia omentsika sakafo ny alika noho ny antony roa: ny voalohany dia fampiononana, ary ny faharoa satria heverina ho sakafo feno izy io, satria io no lazain'ny mpanamboatra anao sy ny hoy ny mpitsabo anao.
Ny antony maha mora azy dia miverimberina satria mety kokoa sy haingana kokoa ny manome sakafo indostrialy mivantana avy ao anaty kaontenera, Ary avy eo dia misy ny olana amin'ny fomba anoloran'ny mpitsabo biby azy. Na izany aza, izay lazain'ny mpitsabo dia manohitra ny lojika fototra indrindra, satria mihinana ny henan-jaza ary tsy maintsy mihinana hena fa tsy serealy. Na izany aza, ny fiofanana azon'ny mpitsabo biby amin'ny sakafon-kaninina, mandritra ny 3 taona maharitra ny asany, dia tsy misy. Ho an'ny fotoana io. Tsy manome azy ireo hianatra fa tokony hihinana amphibians, vorona ary equine izy ireo.
Ka matetika izy ireo dia mahazo an'io fampiofanana io avy amin'ny kaonferansa sy seminera famahanana ireo marika marika. Ary mazava ho azy, lojika ny mieritreritra fa tsy misy marika handamina kongresin'ny sakafo hiteny ratsy ny marika manokana. Lojika izany.
Amin'izany fomba izany no ahazoan'ny mpitsabo biby, ankoatry ny fampahalalana, ny fifandraisana amin'ny fomba hivarotana ireo marika ireo amin'ny toeram-pitsaboana Veterinary ho avy, izay hofenoina alika misy hoditra, fo, aretim-bavony ... rafitra varotra tsara izany, na izany aza. olana hafa ity. Andeha hojerentsika ny olana.
Betsaka ny olona manontany ahy, Antonio, ahoana no hialako amin'ny fanahiana amin'ny alika?, Ary valiako foana izy ireo: ajanony ny fanomezana sakafo mahantra ho an'ny biby. Rehefa manome alika amin'ny alika indostrialy miorina amin'ny serealy ny alika, na inona na inona antony, fampiononana na amin'ny tolo-kevitr'ireo mpitsabo biby, dia mandà izany amin'ny sakafony isika, karazana otrikaina isan-karazany, izay tena ilaina, averiko indray izany mba ho mazava, MORA. , ho an'ny ain'ny biby.
Mila asidra amine 22 ilaina amin'ny alika ny alika. Izy tenany, amin'ny alàlan'ny atiny, dia mahavita mamokatra 12 amin'ireo asidra amine ireo, kanefa, ny 10 amin'izy ireo dia tsy maintsy azo avy amin'ny sakafony. Ary tsy ireo asidra amine ireo, toy ny taurine, lysine, arginine na threonine, no tsy hita ao amin'ireo rojom-bolo asidra amine an'ny proteinina. Noho izany dia hitantsika mazava eto fa mila hena, trondro na atody ny alikantsika mba hahazoana izay tokony hiainany.
Avy amin'ny bokin'ny lehibe Carlos Alberto Gutierrez Ilay veterinera-sakafo mahavelona, ​​Ireo fahamarinana mahavariana momba ny sakafon'ny alikanao:
Amin'ny ankapobeny, misy asidra amine 22 samihafa takin'ny alika. Amin'ireo asidra amine 22, 12 no azo vokarin'ny alika (Ao anatiny, ao amin'ny atiny) Ny 10 hafa tsy azo vokarina ary noho izany dia tsy maintsy avy amin'ny loharano ivelany: sakafo. Ireo asidra amine ireo dia fantatra amin'ny teny hoe "tena ilaina":
ASIDA AMINO TSY MAHASOA - ireto asidra amine dia mety noforonin'ny vatana. Satria afaka mamokatra azy ireo ny vatana, tsia mila manatrika ny sakafo izy ireo.
ZAVATRA AMINO MAHAY - tsy izany afaka vokarin'ny vatana ary
tsy maintsy avy amin'ny sakafo ireo. Zahao ity famaritana fohy ny tsirairay amin'ireo asidra amine 10 ilaina. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanomezana proteinina tsara kalitao:
ARGININA: manentana ny hery fiarovan'ny vatana, mitaona ny famoahana ny hormonina mitombo ary
manohana ny aty amin'ny fanadiovana amoniaka.
HISTIDINE: mamoaka histamine, mifandray amin'ny fifehezana ny fanaintainana ary manitatra ny sambo
lalan-dra kely hanaitaitra ny tsiambaratelon'ny ranom-bavony avy amin'ny vavony.
ISOLEUCINA: sy LEUCINA: jereo VALINA.
LYSINE: mampiroborobo ny fitomboan'ny taolana amin'ny alika kely ary mandrisika ny famoahana ny ranon'ny gastric.
METHIONINE: manampy ny gallbladder ao aminy fiasa, manampy amin'ny fisorohana ny famonoana menaka ao amin'ny atiny, mampifandanja ny pH amin'ny lalan-dra ary manome fidirana amin'ny taurine.
PHENYLALANINE: misy ifandraisany amin'ny fanaraha-maso ny fahazotoan-komana, fitomboan'ny tsindry raha sendra misy fihenjanana, miaraka amin'ny fiasan'ny mineraly ny lokon'ny volo ary ny hoditra dia miteraka adrenaline sy noradrenaline.
TREONINE: mifehy ny famoahana angovo, mihetsika tsara amin'ny toe-po na fahaketrahana, mamokatra adrenaline ary mpialoha lalana azy hormonina tiroida.
TRYPTOPHAN: mamokatra serotonin, mpanentana torimaso.
Ilaina ny sakafo
Ny alika dia biby mpihinana hena, izay na dia tafiditra tanteraka amin'ny fiarahamonina olombelona aza dia tsy omnivora toa antsika. Izany dia mahatonga ny sakafo fihinana mifototra amin'ny sakafo indostrialy azo avy amin'ny akora ratsy kalitao (ratsy be ka tsy hihinananao azy), ohatra, loharanom-olana tsy mety ritra ho an'ny biby fiompintsika, manomboka amin'ny aretina ara-batana, ka miteraka fihenjanana manodidina ny sakafo, vokatr'izany, alika miaraka amina fihetsika sy fitondran-tena maharesy lahatra izay tsy haintsika na tsy haintsika ny mamaha.
Ny alika dia mahazo antsika ny zava-drehetra amin'ity fiainana ity amintsika. Raha mivoaka izy, dia satria avoakantsika izy, raha misotro izy dia satria manome azy rano isika, ary raha mihinana izy dia satria isika manome sakafo azy. Raha misy tsy fahampiana amin'ny sakafony dia isika no manana andraikitra hanitsy azy, satria tsy vitany izany. Na izany aza, izy no mijaly amin'izany.
Misoroka ny fanahiana ao amin'ny alikako dia mora
Tokony hiezaka ny hahalala ny fetran'ny alika isika, ary tsy hino fa satria manome zavatra hohaniny isika, misy rano ary avoakantsika mandritra ny 20 minitra isan'andro dia tokony ho faly izy. Tsy mahafeno ny zavatra ilainao izany. Andeha hojerentsika izy avy eo amin'ny lafiny ilany fiainana, ary amin'izay dia afaka atsahatra ny maha-olona ny biby izay farany, inona no tokony hiainana fiainana toy izany. Ary zonao ny tsy hahomby.
Imbetsaka dia esorintsika ny zaka ho diso, tsy hahomby ary izany dia zontsika rehetra. Raha manimba zavatra ny alikao rehefa miala ao an-trano ianao ary avelanao irery izy, dia tsy hanao izany ho valifaty aminao sy ny olonao izy, fa kosa mila milaza zavatra ilaina izy, ary ianao sy ny sakaizany ary ny làlan'olombelona dia tokony hahalala tsara ny toe-javatra.
Tokony ho fantatrao ihany koa ny filan'izy ireo, mba tsy ho loharanom-pahasahiranana sy fitaintainanana izy ireo. Toy izany no ialana amin'ny fanahiana amin'ny alika.
Raha manana alika mihidy 23 ora isan'andro ao an-trano isika, mihinana sakafo mora, nefa tsy mifandray amin'ny olon-kafa ao amin'ny karazany, tsy milalao, mivoaka mifatotra ary mitafy vavam-baravarana, tsy afaka ary tsy tokony hanantena izany isika faly. Lazaiko aminao avy eto ry olona malala fa zavatra tsy azo atao izany.
Miarahaba sy manidy
Ny fomba, ny fomba hialana amin'ny fanahiana amin'ny alika dia mora; mahafeno ny ilainao. Diniho izay ilain'ny alikao ary omeo azy. Tsy misy teny mitovy hevitra amin'ny fitiavana.
Raha tsy misy resaka lavitra dia antenaiko fa manampy anao hisaintsaina ireto andalana ireto.
Miarahaba ary raha manana fanontaniana na olana ianao dia avelao amin'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity. Ary karakarao ny alikanao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hisorohana ny fanahiana amin'ny alika
Ka araky ny teninao dia ny alika mamaky zavatra dia alika izay amin'ny lafiny sasany na hafa mijaly amin'ny fihenjanana na fitaintainanana, angamba noho ny zavatra ezahiny holazaina amiko: Dalmatian olon-dehibe, nitazona sy voavonjy tamin'ny toe-javatra fanaovana sorona Tonga eo ambony fandriany fotsiny aho rehefa tonga ny fotoana hatory ary afaka mivoaka mankeny amin'ny fari-trano aho mba hifaneraserana na hifoka na hanao zavatra izay tsy mitondra ahy mihoatra ny 5min. Avoakako in-4 isan'andro ny alikako ary ankoatry ny dia afovoany izay x hafanana dia 15 / 20min., Ny voalohany sy ny farany dia ny mandeha mahita zavatra, manimbolo ny zava-drehetra ary mankafy miaraka amin'ny alika hafa, na izany aza, hoy hatrany izy. mihinana ny fandriany IHANY REHEFA mivoaka amin'izany fotoana izany aho: voan'ny adin-tsaina izy, maninona no vakiny fotsiny izany ary amin'izao fotoana izao ????
Misaotra anao ary tiako ny lahatsoratrao.
Mampidi-doza tokoa, ny manolotra karazana teknika na manome torohevitra momba izay tokony hatao, nefa tsy mahalala vaovao momba ilay biby, fa manatrika fanazavana momba ny olan'ny andalana 8 na 10 fotsiny, ary tsy tena fantatra hoe NA INONA ... ary vokatr'izany dia mety tsy maintsy mihabe ny olana ianao.
Ohatra, amin'ny alika misy tahotra ary misy olana mahasosotra, raha omentsika fotoana fofon'ireo izay notantarainao ianao, ny zavatra azo antoka indrindra dia rehefa miady saina ny alika ary mila fomba hitantanana azy, amin'ity indray mitoraka ity dia tsy manaikitra ny fandriana fotsiny raha tsy ny toerana rehetra nametrahan'izy ireo sakafo ho lalao. Raha ny tena izy dia mila mitandrina tsara amin'ireo zavatra ireo ianao, ary tsy mamily ny hafa amin'ny faniriana hanampy amin'ny fomba rehetra, nefa tsy manana ny angon-drakitra sy ny fiomanana sahaza azy ireo mba hahatratrarana ny tanjona hanatsara ny kalitaon'ny alika ary ny torolàlana ho an'ny olombelona, ​​satria ho antsika dia torohevitra tsotra amin'ny tranokala iray, dia mety hanjary olana amin'ny olona velona izany, izay mahita ny taolany ao anaty tranon-kenna.
Eny, toerana roa samy hafa izy ireo. Manaiky aho fa tsy tokony hamitaka azy io, fa ny azoko ambara aminao, satria hitako tamin'ny alikako manokana sy ireo an'ny hafa izany, ny fofohana fofona dia manampy azy ireo ho tony kokoa. Na dia mahatsapa tahotra na tsy fandriam-pahalemana aza izy ireo.
Saingy, samy manana ny heviny ny tsirairay, ary hajaina.
Mamafa ny hevitro aho.
Tsia raha mifanaraka amin'izany aho. Ny fanolorana fanatanjahan-tena mahasoa dia tena mahasoa ho an'ny alika. Na izany aza, misy ny fomba fitondran-tena sasany izay tsy manaiky an'ity karazana fampihetseham-batana ity amin'ny fiantombohan'ny fampianarana / fianarana na raha manandrana manasongadina izany ianao
Mora ny manome sosokevitra zavatra toa lojika, na izany aza tsy ny fampihetseham-batana na teknika fotsiny fa ny fotoana ampidiranao azy, izay mitarika anao hahita fahombiazana amin'ny famerenam-bidy na fanitsiana fitondran-tena. Izay no tiako holazaina amin'ny famitahana.
Alika iray manana ahiahy na fahasosorana, aza asiana trinket ao an-trano hamoizam-po azy satria manome tanjona vaovao ianao rehefa tratry ny adin-tsaina. Lazaiko aminao fa Ethologist aho ary efa am-polony taona no nampianarako alika. Ka mila mitandrina ianao rehefa manoro hevitra.
Ary izay manisa dia tsy ny hevitra loatra, fa ny tohan-kevitra manohana azy. Fantatro ny olona mino fa afaka mampiofana alika amin'ny vozon'akanjoko elektrika izy ireo, ary manana ny heviny izy ireo, izay mifanohitra amin'izay lazain'ny fanadihadiana momba ny Ethology eran-tany.
Ary aza mamafa ny hevitra. Tsara izany. Mety tsy hahomby izy io ary tsy misy zavatra mitranga.
Afaka mianatra amin'ny zava-drehetra ianao, na amin'ny fahombiazana izany na amin'ny lesoka.
Mianatra amin'ny zavatra rehetra ianao, eny. 🙂
Ireo izay "manabe" amin'ny vozon'akanjoko herinaratra, kendaina ary ireo zavatra ireo dia manana lamba ...
Mifanohitra tanteraka amin'ny vozon'akanjoko na koka aho. Ny teknikan'ny asako dia mifototra amin'ny fikolokoloana sy ny fifehezana tsara ary ny fifehezana mifanohitra amin'ny teknika fanaingoana Clicker. Ny mpianatro sy ny alikako dia malalaka na miaraka amin'ny Easy-Walkers.
Ny fomba fampianarana coercive no loharano voalohany tsy ahafantaranao izay ataonao.
Aretina mahazatra amin'ny alika kely
Marina ve fa toy ny tompony ny alika?